Ndege Kusiyanisa Grating, Reflective Grating, Chiedza Grating Mugadziri muChina
Tsanangudzo:Ndege Kusiyanisa Grating,Tichifungisisa Grating,Chiedza Grating,Optical nesefa,,
 HomeProductsKusiyanisa GratingNdege Kusiyanisa Grating
Ndege Kusiyanisa Grating (Total 20 Products)
Zvigadzirwa zve Ndege Kusiyanisa Grating , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Ndege Kusiyanisa Grating , Tichifungisisa Grating vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Chiedza Grating R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
China Ndege Kusiyanisa Grating Vatengi
Zvirongwa zvePlanar zvinonyanya kushandiswa pakuongorora kwesystem uye kuyerwa kwemwenje yehurefu. Icho chishandiso chemaoko chinoumbwa nenhamba huru yematanho akafanana ehupamhi hwakaenzana uye daro rakaenzana. Kune akawanda marudzi ekugutsikana. Iyo inowanzo shandiswa nesefa inogadzirwa nekunyora huwandu hwakawanda hwenzvimbo notches pagirazi. Iwo maNick akapatsanurwa kuita opaque zvikamu, uye chikamu chakatsetseka pakati pematanho maviri anogona kuendesa mwenje. Iyo yakasarudzika nesefa inogadzirwa nekambani yedu ine zviuru kusvika makumi ezviuru emacheka mukati me1CM upamhi, uye mwenje unopfuura nepakati peseve. Mhedzisiro inokonzeresa ndeye mhedzisiro yekukamhina-kutsemuka uye kupindirana kwakawanda.
Ndege Kusiyanisa Grating Tichifungisisa Grating Chiedza Grating Optical nesefa Kusiyanisa Grating